Halatra sy vono olona :: Tovolahy maty nihantona, avy nanindrona antsy ny namany • AoRaha
Maty tsy tra-drano ny tovolahy iray, roapolo taona, mipetraka any amin’ny fokontany Tsararivotra, distrikan’i Bealanana, faritra Sofia. Hita nihantona teo amin’ny hazo ivelan’ny tranony ny vatana mangatsiakany, afak’omaly alina. Voatondro ho avy nandratra ny namany tamin’ny tsindron’antsy io tovolahy io ka heverina ho nananton-tena. Tonga tany Bealanana, omaly, ny fianakavian’ity namoy ny ainy nikarakara sy naka ny razana.
Avy any ambanivohitra no tonga mianatra any Bealanana ireto tovolahy roa, mpinamana, roapolo taona sy enina ambin’ny folo taona. Samy mitokan-trano ao amina fokontany iray izy roa lahy. Zava-doza anefa no niseho, afak’omaly hariva.
“Novakiany sy nidiran’ilay tovolahy, roapolo taona, ny tranon’ilay ankizy, enina ambin’ny folo taona, tamin’ny fotoana tsy nahateo an’itsy farany. Nikasa hangalatra tao izy. Tonga tampoka anefa ny tompon-trano. Nikoropaka ilay nandroba ka naharay antsy. Notsindroniny io ankizilahy io. Nandositra izy, avy eo », hoy ny fanampim-baovao avy amin’ny zandary any Bealanana. Naratra mafy teo amin’ny tendany ity voatsindron’antsy.
Ratra sy antso vonjy
Mbola afaka niantso vonjy teo amin’ny mpiara-monina izy. Tonga tany an-toerana ny zandary nanampy ny olona tamin’ny fitondrana azy tany amin’ny hopitaly sady nanao ny fanadihadiana.
“Nisomebiseby tamin’ny famonjena an’ilay ankizy maratra ny olona. Ilay voalaza fa nandratra kosa efa nody tany an-tranony. Niantso anay ny lehiben’ny fokontany, tokony ho tamin’ny valo ora alina, minitra maromaro taorian’ny nisehoan’ny tsindron’antsy, fa hita faty mihantona tamin’ny tady teo amin’ny hazo lehibe eo akaikin’ny tranony ilay tovolahy voatondro ho nanao ny herisetra”, hoy ihany ny zandary.
Mety ho noho ny tahotra sy tebiteby ary nenina tamin’ny zavatra nataony, hoy ny mpanao famotorana, no nahatonga ity tovolahy nananton-tena.
Fanodikodinam-bola :: Orinasa vahiny very vola an’arivony tapitrisa ariary
Tahotra ny aretina « Coronavirus » :: Mpianatra malagasy iray avy Shina tafody an-tanindrazana